Archdiocese of Mandalay blog: သင်၏အနာဂါတ်သည် သင်၏ အတိတ်ထက်တောက်ပသည်။
ဘုရားသခင်က သင့်အား အလျော့မပေးရန် မိန့်ကြားသည်။ ဘုရားသခင်နှင့် နီးကပ်စေရန် ကျွန်တော်၏ မိဘများက ကျွန်တော့်အား မွေးဖွားခဲ့သည်။ သို့သော် ကျွန်တော်၏ မိဘများအား ဘုရားသခင်နှင့် နီးကပ်စေရန် မည်သည့်အရာက တွန်းပို့ခဲ့သနည်း။ အိမ်တစ်အိမ် ဖြစ်ပါသည်။ ရိုးရိုး တစ်ထပ်အိမ်တစ်လုံးသာ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအိမ်သည် သူတို့အား ဘုရားသခင်နှင့် နီးကပ်စေသည်။ မည်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်ကို ကျွန်တော်ပြောပါရစေ။
သင်သည် ရှပ်အင်္ကျီတစ်ထည်၊ ၀တ်စုံတစ်ခု၊ ဖိနပ်တစ်ရံကို ၀ယ်ယူပြီးနောက် အ၀ယ်မှားသည်ဟု နောင်တရဘူးပါသလား။ ၎င်းကို ကျွန်တော်၏ မိဘများ ကြုံခဲ့ဖူးပါသည်။ သို့သော် အင်္ကျီ သို့မဟုတ် ဖိနပ်ဝယ်ခြင်း မဟုတ်ပါ။ အိမ်တစ်လုံးကို ၀ယ်ခဲ့ဖူးပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် သူတို့သည် ထိုအိမ်ကို မနှစ်သက်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်၏ မိခင်သည် ခက်ခဲသော အရောင်းလုပ်ငန်းကို စတင်ပါသည်။ သူတို့သည် သတင်းစာထဲတွင် အပတ်စဉ် ကြေငြာသည်။ ကြော်ငြာမှာ ဤသို့ဖြစ်သည်။
အကောင်းစားတစ်ထပ်အိမ် 3BR 2TB
နောက်ဖေးတွင် ကားဂိုဒေါင်နှင့် ဥယျာဉ်
နေ့စဉ်အိမ်အကြောင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်း နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ် ရှိပါသည်။ သို့သော် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သူတို့က မ၀ယ်ကြပါ။ မရောင်းရသော အချိန် တစ်လကြာပြီးနောက် မိခင်က ကြော်ငြာကိုပြောင်းလဲ လိုက်သည်။
ပိုင်ရှင် စိတ်ပျက်နေသည်။ မရောင်းရလျှင် ပိုင်ရှင်မကြာမှီ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေလိမ့်မည်။ နောက်တာပါ။ ဒါပေမယ့် အမေကတော့ အမှန် တကယ်စိတ်ပျက်နေသည်။ သူမသည် အခြားအိမ် တစ်လုံးကို ၀ယ်ယူပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းင်းအိမ်အတွက် ကျသင့်ငွေကို ပေးနေရသည်။ ယခုရောင်းရန် ကြိုးစားနေသော အိမ်အတွက်လည်း ပိုက်ဆံပေးနေရသည်။ သူမသည် ကြွေးထဲတွင် နစ်နေသည်။ ထို့ကြောင့်အိမ်ကို မြန်မြန်ရောင်းရရန် အမေလိုအပ်နေသည်။
အမေသည် မှောင်မိုက်သော တိုင်ကီကြီးထဲတွင်ရှိသည့် ကြွက်ကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။ သူမအတွက် မျှော်လင့်ချက်ရှိပါမည်လားဟု သူမ ရှာဖွေနေသည်။ ထိုအချိန် အတောအတွင်း အမေသည် ဇာတာတစ်ခွင်ကို စစ်ဆေးသည်။ ထူးဆန်းသော ဗေဒင်ဆရာများနှင့် တိုင်ပင်သည်။ ထိုထူးဆန်းသော ဗေဒင်ဆရာများသည် ထူးဆန်းသော ဆံပင်ပုံစံများရှိသည်။ သူမ လက်လှမ်းမှီသည့် ဟောစာတမ်းပါရှိသော တရုတ်မုန့်များကို ၀ယ်ယူ၍ ထိုဟောစာတမ်း အားလုံးကို ဖတ်ရှုသည်။ သို့သော် ထိုအရာများသည် အိမ်ရောင်းရန် မည်သည့် အကူအညီမှ မရရှိပါ။ ထိုဝယ်ယူရသော တရုတ်မုန့်များကြောင့် ဆယ်ပေါင် ကုန်ကျသည်။
သို့သော် ဘုရားသခင်၌ အလွန်ကြီးမားသော ဟာသဉာဏ်ရှိကြောင်း ယခုအခါ ကျွန်တော်ယုံကြည်သည်။ အကြောင်းမှာ ထိုတစ်ချိန်တည်း၌ အမေသည် ဆုတောင်းပွဲတက်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခံရသည်။ ထိုဆုတောင်းပွဲသို့ သူမ မသွားလိုပါ။ အဲ့ဒီ ဆုတောင်းပွဲက လူတွေစုပြီး၊ သူတို့ရဲ့ လက်တွေမြှောက်ပြီး အာ . . အာ . . . လေ . . လု . . . .ယား လို့ဆိုပြီးက ရတာလားဟု သူမက မေးသည်။ သို့သော် အမေသည် ထိုထူးဆန်းသော လူများနှင့် လိုက်သွားသည်။
စိတ်ပျက်ခြင်းသည် အမေ့အား ထူးဆန်းသော အရာများကို ပြုလုပ်စေသည်။ အကြောင်းမှာ အမေသည် မရောင်းရသေးသော အိမ်ကြောင့် စိုးရိမ်ပူပန်၍ နေထိုင် မကောင်းဖြစ်နေသည်။ မည်သည့်နည်းနှင့် ဖြစ်စေ၊ သူမ ကြိုးစားလိုသည်။ ထို့ကြောင့်အမေသည် ထူးဆန်းသောလူများနှင့် ပြည့်နေသော ဆုတောင်းပွဲကိုလည်း အမေတက်ရောက်လိုသည်။
ထိုသို့ဖြင့် အမေသည် ပထမဆုံးဆုတောင်းပွဲကို တက်ရောက်သည်။ အမေ သဘောကျသွားသည်။
အာ . . . လေ . . . လု . . . ယား ဟု သီချင်းဆို၍ သူမ က သည်။ ဤအချက်ကို သေချာစွာဂရုပြု၍ ဖတ်ပါ။ ယခင်က ရောင်းမည့် အိမ်အကြောင်း မေးမြန်းစုံစမ်းသည့် ဖုံးခေါ်ခြင်း တစ်ရက်လျှင် နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်သာ ရှိခဲ့သည်။ ဆုတောင်းပွဲသည် သောကြာနေ့တွင် ဖြစ်သည်။ နောက်နေ့ စနေနေ့တွင် ရောင်းမည့်အိမ်အကြောင်း စုံစမ်းသည့် ဖုန်းခေါ်ခြင်း ၃၆ကြိမ် လက်ခံရရှိသည်။ အမေဆုတောင်းပွဲ တက်ရောက်ပြီး ၂၄နာရီကြာပြီးနောက် ညအချိန်တွင် သူမ၏ အိမ်သည်ရောင်းပြီး ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် ပြောကြားသောအရာမှာ“သင့်ဘ၀တွင် ငါ့ကို ပထမနေရာ၌ ထားပါ။ ငါသည် သင်၏ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းများကို ကြည့်ရှု ဖြေရှင်းပေးမည်။”ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
သင်သည် ကျွန်တော့်အမေကဲ့သို့ ဖြစ်နိုင်သည်။ တန်ခိုးတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်စေရန် သင်သည် လပေါင်းများစွာ စောင့်စားနေခဲ့သည်။ မည်သည့် တန်ခိုးပြခြင်းမှ မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါ။ သို့သော် အရှုံး မပေးပါနှင့်။ ယုံကြည်ပါ။ ဘုရားကို ပထမနေရာတွင်ထားပါ။ သင်၏ မှောင်မိုက်တွင် ရုတ်တရက် အလင်းရောင်များတွေ့ မြင်ရသော နေ့ရက်သို့ ရောက်ရှိလာပါလိမ့်မည်။ ထိုအခါ သင်၏ အနာဂတ်သည် သင်၏ အတိတ်ထက် တောက်ပကြောင်း သင်တွေ့ရလိမ့်မည်။